Umatshini wokubulala iintsholongwane zomoya - iShanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Umatshini wokubulala iintsholongwane kwi-FAUCI
Uwusebenzisa njani lo matshini?
Impendulo: Okokuqala, ngokwemiyalelo, qala ukhuphe ifilimu yokutywina ye-disinfection kunye nokucoca izinto zokucoca ulwelo, uyibuyisele kumatshini ngokwesikhundla esichongiweyo, kwaye uvale isiciko.
Lo matshini ungabekwa kwigumbi elinendawo efanelekileyo yale modeli, kwaye unokusetyenziswa ngesiqhelo emva kokuba uvuliwe.
(Ixesha lokutshintshwa kwe-disinfection kunye nokucoca izinto zokucoca kumatshini sisiqingatha sonyaka emva kokutywinwa, kunye nezinye izinto zeefilitha kufuneka zitshintshwe ngokwenqanaba lokucoceka ngokwemiyalelo)
Lo mshini wokubulala iintsholongwane uyisusa njani isibulala-zintsholongwane kwaye uyicoce?
Impendulo: Lo matshini usebenzisa izixhobo ezakhelwe ukubulala iintsholongwane ukuze ukhulule ubume bentsholongwane obucocekileyo kunye nococeko, kwaye usasaze ngokulinganayo kwaye ugubungele zonke iimbombo emoyeni wangaphakathi ngumoya ojikelezayo womatshini. Ibamba kwaye ibulale iintsholongwane okanye intsholongwane enokuthi ivele emoyeni nangaliphi na ixesha, kwaye ibolile ngokukhawuleza. Ikwaphelisa i-VOCs iigesi eziyingozi emoyeni.
I-ROS ioksijini esebenzayo kunye ne-chlorine dioxide isebenza kunye ukukhawuleza ukubola kunye nokuphelisa ii-VOCs eziyingozi ezahlukeneyo.
Ngokukodwa, ngaba lo mshini wokubulala iintsholongwane ungayibulala i-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo?
Impendulo: Okwangoku enye yezona ntlobo ziphambili zemveliso efanayo kwintengiso sisixhobo sokucoca umoya, esitsala umoya ongaphakathi kumatshini ukuze sifakwe iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane, emva koko sikhuphe umoya ococekileyo ubuyele egumbini. Le ndlela ayinakufezekisa ukubulawa kweentsholongwane kunye neebhaktheriya emoyeni ezibonakala kwigumbi nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuba umzimba womntu uzirhalele, kwaye awunakuthintela ukuhanjiswa kwezifo kunye nokuhanjiswa kwezifo ngexesha lokwenyani;
Olunye uhlobo sisitshizi esibulala iintsholongwane, esitshiza i-hypochlorous acid okanye i-chlorine dioxide isisombululo emoyeni kwi-aerosol ukubulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya ezisemoyeni, nangenxa yokuba i-hypochlorous acid ngokungangqalanga ivelisa ichlorine nedayoksayidi. Uxinzelelo lwasekhaya lwesisombululo se-klorine luphezulu kakhulu, oluya kubangela ingozi emzimbeni womntu. Ezi zibulala-ntsholongwane azivumelekanga ukuba zisetyenziswe phambi kwabantu, kwaye inkungu yokubulala iintsholongwane isekuhanjisweni ngokulinganayo emoyeni. Ukusebenza kweentsholongwane kuphantsi kakhulu;
Izinto ezakhelwe ngaphakathi ze-FAUCI AAPG kumatshini we-FAUCI Wokubulala iintsholongwane kuMoya ukhupha kancinci ukhuselekile kwaye ucocekile kwaye ucocekile ucoceko umoya ococekileyo wemolekyuli ye-chlorine kunye ne-ROS ioksijini esebenzayo. Kwelinye icala, iyabamba kwaye ibulale iintsholongwane ngokuthe ngqo emoyeni, ezinokuthintelwa kwaye zilawulwe ngexesha lokwenyani. Kwelinye icala, kuphela kukuxinana okukhuselekileyo okuphantsi kunokubangela inzalo kunye nesiphumo sokucoca, kwaye ayizukubangela monakalo kubantu kwigumbi elinye.
Ngaba lo matshini wokubulala iintsholongwane ukhuselekile ukuba ungasetyenziswa?
Impendulo: Inqanaba le-ROS yeoksijini esebenzayo eveliswe kumphezulu wento eyakhelwe-ngaphakathi ye-FAUCI AAPG yale mveliso iyafana neyona nto ibaluleke kakhulu nengalinganiyo emzimbeni womntu obulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Ikwayinto yendalo kwaye ikuluhlu lomkhondo. Inenzuzo kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu.
Kwangelo xesha, umatshini wokubulala iintsholongwane owakhelwe-ngaphakathi kwi-FAUCI AAPG upase uvavanyo olufanelekileyo lwe-CMA / CNAS: isiphelo sovavanyo lokutyhefu esinobungozi sibonisa ukuba asiyityhefu; ukuvavanywa kweseli micronucleus kuko konke okungalunganga, oko kuthetha ukuba akukho kuguquka kweseli kwaye akukho tyhefu yemfuza;
Loluphi uvavanyo kunye nesiqinisekiso onalo umatshini wokubulala iintsholongwane okwangoku?
Impendulo: Oomatshini bethu baphumelele uhlolo olufanelekileyo lomzimba obhalisiweyo we-CNAS, kwaye bafumana isatifikethi se-EU CE-ROHS, isatifikethi se-FDA, isiqinisekiso se-MSDS, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane ye-H1N1, iiNgxelo zoVavanyo lwe-Staphylococcus Albus, zoLuntu Iingxelo zovavanyo ze-Enterovirus 71, iiNgxelo zovavanyo ze-Escherichia Coli.
Ngawaphi amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni umatshini wokubulala iintsholongwane?
③ Kufuneka igcine umgama ongaphezulu kwe-1 yemitha kwizinto zentsimbi nakwimpahla yokunxiba;
④ Xa ibhegi etywiniweyo enezinto zokubulala iintsholongwane ingavulwanga, ibhegi inezinto eziphezulu kakhulu. Emva kokuvula ibhegi kwaye ukhuphe imveliso, yenza i-ventilate imizuzu emi-1 ukuya kwemi-5. Emva kokuba ivumba linciphile, inokusetyenziswa ngesiqhelo.
Ukuba umatshini wokubulala iintsholongwane uqhubeka usebenza ngaphakathi, ngaba imaski iyafuneka?